XOG-Kulamo xasaasi ah oo ka dhacay madaxtooyada, RW Rooble oo magacaabaya wasiirada cusub & maamul xubnihiisa laysku qabsaday.
October 17, 2020 Xuseen 0
Aqalka madaxtooyada ee Villa Somalia, waxaa habeenimadii xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble iyo guddoomiyaha golaha shacabka Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Kulankaan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa madaxda ka qaybgashay ay diiradda ku saareen magacaabista golaha xukuumadda Soomaaliya oo aan la magacaabin tan iyo markii Xildhibaanada Golaha Shacabka Codka kalsoonida ah siiyeen Maxamed Rooble.
Warar xogagaal ah oo ay heshay Puntlandtimes ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Rooble uu muddo 48 saac gudohood ah ku magacaabayo golaah wasiirkada isla markaana ay socdaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee loogu dhawaaqayo golaha.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in suura-gal ay tahay in 50% xubnaha qaar ee Xukuumaddii Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ay soo laaban doonaan, halka inta kalena ay noqon doonaan shaqsiyaad ku cusub masraxyada siyaasadda.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa si aad ah laysugu hayey xubnaha kamid noqon doona golaha wasiirada ee ka soo jeeda deegaamada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana si gaar ah arrintaas isugu hayay Guddoomiye Mursal iyo Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Puntland oo markii ugu horraysay ka hadashay wasiirada cusub ee Somalia & waxa ay ka filanayso.
VIDEO: Boqolaal katirsan ciidanka Puntland oo tababar uga furmay magaalada Qardho.
DAAWO-Garoowe oo xarumo ganacsi albaabada loo laabay & wasaarado canshuur isku haysta.
DAAWO-Somaliland oo gacanta ku dhigtay gaadiid dagaal oo Puntland lagala goostay & maamulka Puntland oo ka hadlay.
XOGTA:Maxaad Kala Socotaa Qorshaha Military Ee Turkey-ga Iyo Awoodiisa Isbalaarinta Bariga Dhaxe??
Mid kamid ah wasiiradii xukuumaddii Xasan Cali Khayre afka furtay kana hadlay wasiirada la magacaabay
XOG-Khilaaf ka dhextaagan beelaha Abgaal & Xawaadle, Villa Somalia oo madaxweyne kor kaga keentay & Madaxweynayaal hore oo soo farageliyey
Madaxweyne Farmaajo oo madaxtooyada ugu yeeray kulan xasaasi ahna la qaatay wasiiradii xalay la magacaabay
DAAWO: Xogta & Macluumadka ku gadaaman Wasiiradda cusub ee xalay uu magacaabay RW Rooble.
DEG DEG-Somaliland oo deegaamadeeda ka mamnoocday inay yimaadaan dadka ka socda Soomaaliya inteeda kale
Muuse Biixi oo ku soo wajan Sool & Sanaag awaamiir culusna kaga dhawaaqay magaalada Burco.
DP World iyo dekedaha Bosaso & Berbera,”Ma dadkaa kala wanaagsan mise maamulada kala xilkassan?
Sawirro-Muuse Biixi oo qaaday tallaabo digniin cad iyo tusaale u ah Siciid Deniga Puntland